Iskadaa Taleexe, Maamulka Siilaanyo Hargysaa Laga Dareersan Doonaa | <<<GIRIYAADNEWS<<<<
Iskadaa Taleexe, Maamulka Siilaanyo Hargysaa Laga Dareersan Doonaa
Madaxweyne hadii shalay ay xukumadii kaa horaysay ay Sool madaxda qaranka ku laynaysay sidii aad sheegtay, maantana yaa laynaay ma xukumadaada?
Hargysa,(giriyaadnews)-Tan iyo intii uu maamulka dalka la wareegay Siilaanyo waxa maalinba maalinta ka danbaysa hoos u sii dhacaayay amnigii guud ee dalka, taasi oo ay ugu wacantahay maamul xumo iyo caadifad ay dalka la yimaadeen xisbiga Kulmiye oo ahaa xisbi ku dhisan qabyaalad iyo cadho.
Taasina waxa ay dhaxalsiisay in dalkii uu baylah noqdo, iyada oo cadawga Somaliland ay dhanka ay doonaanba ay u mushaaxeen, wax lala yaabo ma aha in inta ciidan hubaysani ay Garoowe ka yimaadaan ay gudaha gobolka Sool wax ka qafaashaan, taasi oo ayna jirin cid ka hor tagtaa ama ka difaacdaa ciidanka Puntland gudaha Somaliland marka laga reebo aagaga ay ciidamada qaranku fadhiyaan ee lagu soo koobay maamul xumo awgeed.
Mar aanu u kuurgalnay arimahani ay ciidamada Puntland ugu soo dhiiradeen in ay soo galaan gudaha Somaliland, iyada oo ayna baryihii hore ku soo dhiiran jirin in ay sameeyaan olole intaasi leeg, ayaa waxa noo soo baxday in xukumada cusubi ay ku fashilantay sugida amaanka gobolkaasi, iyada oo wasaarada maaliyadu ay yaraysay oo ay jartay misaaniyadii ciidanka qaranka ee ciidamada qaranka iyo iyada oo sidoo kale la kala diray sirdoonkii ka hawl gali jiray gudaha Puntland kadib markii laga joojiyay lacagihii lagu kharash garayn jiray dadka xukumada Siilaanyo uga soo warama gudaha Puntland marka laga reebo tiro aad u yar oo si toos ah ugu xidhan madaxtooyada iyo gudoomiyaha sirdoonka.
Waxa gabi ahaanba isku dhex daadsan maamulka ilaa Hargysa laga soo bilaabo ilaa gobolka Sool, waxa dayacan oo baylahsan dhamaan laamaha sirdoionka ee dalka gaar ahaan kuwa ka hawl gala gobolka Sool, waxa hadh cad lagu laayaa magaalada Laascanood madaxdii gobolka Sool, waxa uu madaxweynahu ilaa hada ka jawaabi kari laayahay cida gumaadka ku haysa xukumadiisa iyo madaxdii qaranka ee gobolka Sool.
Waxa uu Siilaanyo ahaa ninkii ku dhawaaqay in magaalada Laascanood mar nin sarkaal ciidanka ka tirsan lagu dilay, sheegay in ay xukumadii Rayaale falkaasi ay fulisay, xiligaasi oo uu ahaa gudoomiyaha xibiga Kulmiye, xiligaasi oo amakaaga iyo fajiciso ku noqotay umada Somaliland, xukumadii xiligaasi ayaa ku tilmaamtay in ay falalkaasi ka danbeeyaan argagxiso weerar qaawan ku soo qaaday Somaliand, xaga uu xisbigii Kulmiye arintaasi diiday uu gudoomiyaha ka ahaa Siilaanyo.
Waxa ay xukumadii xiligaasi xakamaysay oo nafta isugu keentay dadkii qaraxyada ka fulinaayay magaalada Laascanood, hase ahaatee isbadalkii dalka ku yimid waxa ay cadawgaasi markale ka faa’iidaysteen xukumada jilicsan ee taagta daran ee Siilaanyo, waxana ay halis ku hayaan amaanka gobolka Sool, wana hubaal ah hadii aan deg deg waxba looga qaban isla markaasina aan la difaacin kuwa ka soo duulaaya Garoowe in ay barina xukumada xafashka ah ee Siilaanyo ka dareersan doonaan magaalada Hargysa.
Waxana shicibka Somaliland ay Siilaanyo ka sugayaan jawaabteeda cida laynaysa madaxda gobolka Sool? Ma Adaa daka laynaaya oo dawladiiya, ma argaxisaa mise afkaa juuqda gabay?
wariye madaale giriyaadnews hargaysa
« Dawlado Afrikaana Oo Diiday In Ay Aqoonsadaan Somaliland Siilaanyo iyo sawirka Amiin Caamir Iyo Booliska Shiinaha, ma dhabaa in safiirka Itoobiya uu ka soo »